Sina 1/2 Inch Tondra-drano mandeha ho azy plastika mitsingevana valizy amin'ny rano Weier
Valve fanaraha-maso haavon'ny rano mandeha ho azy
1/2 ″ sisiny miditra
3/4 ″ Fidirana sisiny
1, sisiny anatiny
Valve heater an'ny masoandro
Valve famenon'ny kabine
1/2 ″ Sivan-drano
3/4 ″ Sivan-drano
Sivan-drano manaporofo ny fipoahana
1/2 ″ Sivana fanaporofoana rano
3/4 ″ Sivan-drano manaporofo ny fipoahana
1, sivana manaporofo ny rano
Valiha fanaraha-maso ny haavon'ny rano mandeha ho azy Wiir Brand ...
1/2 Inch Tavoahangy rano mandeha ho azy plastika mitsingevana valve fitantanana rano
Inside Side Inlet
Fanamarinana ： CE
Fiainana: 5-10 taona
Fanamarinana ny vokatra
Manan-kery manomboka amin'ny 2020-08-19 hatramin'ny 2025-08-20
Fahaiza-mamatsy: 50000 Piece / Pieces isam-bolana
Fonosana fanondranana mahazatra
Habetsahana (sombin-javatra) 1 - 1000 > 1000
Est. Fotoana (andro) 15 Hifampiraharahana
Ny valizy CONTROL CONTROL LEVEL AUTOMATIC dia vokatra misy patanty fa tsy valizy mitsingevana mahazatra. Izy io dia mamatsy sy mijanona rano avy hatrany arakaraky ny fiovan'ny haavon'ny rano.
Rehefa miakatra amin'ny tsipika fetran'ny rano ny haavon'ny rano, hijanona tsy hanome rano indray mandeha ny rano; rehefa mianjera ny haavon'ny rano, dia hanomboka hanome rano azy ho azy ny valizy.
MODELY Size TYPE KEVITRA INSTALLATION hafanana FANORENANA ASA azo ampiharina
DB15 1/2 ″ Side Inlet Nylon & PC ATSIDA ≤100 °
DBS15 1/2 ″ Top Inlet
DB20 3/4 ″ Side Inlet
DBS20 3/4“ Top Inlet
DB25 1“ Side Inlet
DBS25 1“ Top Inlet
ZHEJIANG WEIER TECHNOLOGY CO., LTD.dia any Wenzhou China. Izahay dia iray amin'ireo famokarana voalohany amin'ny famatsian-drano napetraka, natokana amin'ny famokarana valizy fanaraha-maso haavon'ny rano mandeha ho azy sy vokatra hafa mifandraika amin'izany. Nahazo mari-pankasitrahana manana patanty maro izahay. Miaraka amin'ny ekipa matihanina matihanina, fitaovana famokarana mandroso sy fitaovana fitiliana mazava tsara, afaka mahay mamolavola sy OEM arakaraka ny fepetra takinao manokana izahay. Ny vokatray dia nanondrana any Eropa, Amerika, Moyen Orient, Azia atsimo atsinanana ary firenena hafa. Izahay dia mandray tsara ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao amin'ny fifandraisana amin'ny raharaham-barotra amin'ny ho avy sy ny fahombiazan'ny fiaraha-miasa!
A: Orinasa manana patanty izahay. Manome toky ny vidin'ny fifaninanana amin'ny kalitao tena tsara izahay.
F2: Manolotra santionany ve ianao?
A: Manolotra santionany 2-3 maimaimpoana izahay.
F3: Inona ny fandoavam-bola ekenao?
A: Manaiky ny fandoavam-bola TT (famindrana banky) izahay, fiantohana ara-barotra, Western Union mba hahazoana antoka fa tsy misy atahorana ny hanao raharaha miaraka aminay.
F4: Rahoviana ianao no hanatitra entana aorian'ny fandoavana?
A: Manana fahaiza-manao famokarana lehibe izahay, izay afaka miantoka ny fotoana fandefasana haingana na dia ho an'ny be indrindra aza. Matetika izahay dia manana tahiry be dia be amin'ny ankamaroan'ny vokatra.
F5: Manolotra tolotra OEM sy ampanjifaina ve ianao?
A: Miaraka amin'ny ekipa teknika matihanina sy ny ekipa famolavolana, afaka manamboatra vokatra namboarina mifanaraka amin'ny santionanao na sary.
F6: Manana antoka ara-kalitao ve ianao?
A: Eny, ny vokatray rehetra dia rakotry ny fiantohana 12 volana eo ambanin'ny fampiasana mahazatra. Raha manana olana ianao dia afaka mifandray aminay. Hanao izay rehetra azo atao izahay mba hampifaly anao.
Teo aloha: 1/2 mirefy fanaraha-maso mandeha ho azy baolina mitsivalana fantson-drano fanaraha-maso valizy fametrahana tilikambo rano anatiny
Manaraka: Valiny fanaraha-maso ny haavon'ny rano Wiir Brand plastika mitsentsitra ny valizy amidy
Wiir Brand 1/2 "ao anaty plaka mini-inlet ambony ambony ...
Wiir Brand Mini mitsingevana baolina miditra tsimoramora w ...
Wiir Brand High mikoriana rano mandeha ho azy hydraulic ...
1/2 Inch mitsingevana Ball Valve mandeha ho azy mitsingevana Va ...
Wiir Brand 1/2 Inch automatique floati mini air ...
Wiir Brand mini plastika rano fitoeran-drano mitsingevana ...
Valve fanaraha-maso ny haavon'ny rano, Valizy mifehy ny haavon'ny rano, Valve mitsingevana amin'ny haavon'ny rano, Valve fanaraha-maso haavon'ny rano ho an'ny tanky rano, Sivanin'ny rano, Sivanin'ny rano indostrialy,